Sidee u dhacday kalsooni siinta RW Rooble? | KEYDMEDIA ONLINE
Keydmedia Online ayaa horey usoo qortay in Villa Soomaaliya ay Xildhibaanada siiyay lacag aad u badan, oo laaluush ah iyagoo ku iibsaday codadkooda, taasoo keentay in Maanta la waayay hal Xildhibaan oo diiday ama ka aamusay codeyntii kalsoonida lagu siiyay Rooble.
MUQDISHO, Soomaaliya - Xildhibaanada Gollaha Shacabka ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku ansixiyay magacaabista Ra'iisul Wasaaraha cusub ee Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble, kaasoo halgan badan u galay inuu helo kalsoonida Baarlamanka.
Gudoomiyaha Gollaha Shacabka Maxamed Mursal oo gaba-gabadii hadlay ayaa ku dhawaaqay natiijadda kulankii Maanta, isagoo shaaciyay in 215 Xildhibaan ay taageereen kalsooni siinta RW Rooble, mana jirin wax diidmo ah.
Isla goobta ayaa lagu dhaariyay Rooble, isagoo hadda haysta sharciyadda inuu soo magacaabo Golle Wasiiro, kuwaasoo looga fadhiyo inay qabteen shaqooyin culus, oo ay kamid tahay doorashadda dalka.
Xarunta Villa Hargeysa oo Madaxtooyadda ku dhex-taallo ayuu kulanka ka dhacay, waxaana ka baaqday Farmaajo inuu tago, waxaana xafiiskiisa la sheegay inuu qabey kalsoonida in Rooble la meel-marinayo.
0 Comments Topics: farmaajo maxamed xuseen rooble